Inbound Kushambadzira uye Nyowani Yekutengesa Funnel | Martech Zone
Svondo, Gunyana 27, 2009 Mugovera, October 18, 2014 Douglas Karr
Ndichiri kugadzirira kutaura muCincinnati svondo rino, ini ndaida kupa yakanaka kuona iyo yaitaura nezve kutsvagisa uye zvemagariro venhau zvakachinja maitiro ekutengesa. Hezvino zvandinodaidza izvo Nyowani Yekutengesa Yekushandisa:
Zvaimbove izvo kuti vatengesi vaidzora iyo mhando uye mameseji online, zvinoda vatengi uye mabhizinesi kuti vaone kuratidzira, vatarise ruzivo rwebhurocha uye pakupedzisira vataure kumutengesi. Panguva iyoyo, ivo vaive vasina kuita sarudzo yekutenga. Iye mutengesi anogona kuve anoshamisa anoshanda mukuzunungusa tarisiro nekuvhara kutengesa.
Nekuuya kwesocial media neinjini dzekutsvaga, vatengi nemabhizinesi havazi ivo chete kutsvaga… Vava ikozvino rekutsvaga. Izvi zvinoreva kuti tarisiro yakashongedzwa-zvine hunyanzvi kukambani yako, zvigadzirwa zvako, masevhisi ako, kufara kwakaita vatengi vako newe, uye vanogona kutova nesarudzo pamberi ivo vanotobatana nevatengesi vako.
Kunzwisisa izvi kwakakosha kana iwe uchida kunyatsogadzira inbound kushambadzira inotungamira:
Imwe yemakanganiso akajairika andinoona makambani ari kuvhura mega-saiti ane ruzivo rwakawanda zvekuti anotendera vatengi vanogona kuti vakukanganise. Ita nyore yako saiti, kurerutsa mameseji ako uye kubvumira vanhu kuti vawane ruzivo rwakakwana kuti vasvike parunhare, vatarise demo kana kurodha whitepaper.
Kana iwe ukapa zvakadzama kudzika muzvipiriso zvako kuburikidza nemadhimoni, mapepa evachena, kana nyaya dzenyaya… nguva dzose, nguva dzose, gara uchida kuti mushanyi anyore asati atora rimwe danho Vanhu vajaira kutengesa ruzivo rwemazita avo kuti vawane ruzivo rwavanoda. Uye avo vanotora danho rekuwedzera iri vanofanirwa kusangana navo sevanokwanisa kutungamira.
Bhadhara vatengesi vakangwara uye vanokurudzirwa. Zuva reiye cheesy, wepamusoro-wekumanikidza mutengesi wapfuura kare. Kana mutengesi atora nhare, vanowanzo sangana nemumwe munhu kune rimwe divi remutsara uyo atoziva bhizinesi ravo. Dzimwe nguva vanozvinzwisisa zvirinani kupfuura mutengesi! Ini ndichiri kushanda nemakambani uye ndinogara mukati mavo ekutengesa mafoni senge inyanzvi yenyaya, dzimwe nguva ndiwo mutsauko wese.
Kuwedzera tekinoroji kune yayo yepamusoro. Kana iwe uchinzwisisa mafambiro ari kuita vashanyi kuenda kune yako saiti, iwe unogona kunyorera yakagadziriswa mameseji kwavari. Kana iri yekutsvaga, akasiyana mazwi akakosha pamushandirapamwe wakasiyana anofanirwa kukonzeresa akasiyana mafoni-kune-chiito uye mapeji ekumhara. Kana iri Twitter, ungangoda imwe nzira yekutaurirana. Kana iri LinkedIn, imwe nzira yehunyanzvi. NeVOIP uye nharembozha, zvinokwanisika kuridza nhare dzakasiyana kubva kwakasiyana masosi
Pashoma, tanga kuona uye kuteedzera nzira dzese dzakasiyana dzinotorwa netarisiro mubhizinesi rako. Kunyangwe iri yekuendesa kana yekubhadharira-penya-kudhiza kushambadzira, iwe unofanirwa kuve nenzira yekudyidzana kuti uwedzere kutendeuka kwehuwandu.
Tags: nyowani yekutengesa fanerakutenga sarudzotsvakurudzosales salesnelsocial media faneli
Sep 29, 2009 pa 11: 53 AM
"Zvirinani, tanga kuona nekuteedzera nzira dzese dzakasiyana dzinotorwa netarisiro mubhizinesi rako"
Ndezvipi zviwanikwa zvaunoshandisa kuita izvi? Google Analytics? Radian6? Visistat? Ndiri kutsvaga dzimwe nzira dzekutevera.
Sep 29, 2009 na8: 50 PM
Kutanga ne Analytics idanho rakakura rekuona izvo zviwanikwa zviri kupa traffic kune yako saiti. Kunyangwe zvirinani id ichiita imwe ongororo pane pane homwe dzakawanda dzemigwagwa inoenderana - izvo zvinogona kuitwa kuburikidza nekumwe kutsvagurudza kwekutsvaga (kungotevera ndiani akaiswa mazwi akakosha!).